Ejipta: Voatafika Ny Diabe Mitaky Ny Hamaranana Ny Fanohintohinana Ara-Pananahana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 09 Jona 2012 12:25 GMT
Vakio amin'ny teny عربي, বাংলা, Italiano, Français, Swahili, bahasa Indonesia, русский, Español, Ελληνικά, English
@seldeeb: Andian-dehilahy no nanafika ny mpanao diaben'ny #EndSH nikendry ny handrava sy hidaroka ny mpanao fihetsiketsehana.
@seldeeb: Nanosika ireo mpanafika ny lehilahy tao amin'ny Diabe #EndSH saingy maro loatra ny mpanafika ka voasintosintona ny vehivavy sasantsasany
@seldeeb: Nikoropaka noho ireto andian'olona ny teo amin'ny manodidina ka nanakatona ny toeram-barotra fa mahery setra loatra ry zalahy#EndSh. mba nisy fivarotana iray nampialoka ihany tamin'ny farany
@seldeeb: Nilaza ny nanatri-maso sasantsasany fa efa nihogahoga an-dry zavavy ireo olona nihodidina ny mpanao diabe nialoha ny fanafihana #EndSH
@amirahoweidy: Fomba fanao noforonin'ny Antoko Nasionaly Demokratikan'i Mubarak tamin'ny 2005 ny manohintohina ny vehivavy mpanao fihetsiketsehana
@MohammedY: @Turk4Syria tsy mbola nisy mihitsy. Efa mahazatra loatra ary maro ny mpanao azy sady eken'ny eo amin'ny fitondrana ny mitandroka ny vehivavy mpanao fihetsiketsehana #EndSH
@deena_adel: Azontsika atao ve azafady ny mampiasa ity fahatezerana indray momba ny fanafintohinana ara-pananahana ity ka mandray dingana mivaingana hiadiana aminy? #EndSH
Misy fihetseham-po hafa hita amin'ny alalan'ny fampiasana tenifototra #EndSH ao amin'ny Twitter.